Taliska waddooyinka Nugaal oo walaac ka muujiyay gaadiid ay ku qoran yihiin taarkada GD. – Radio Daljir
Taliska waddooyinka Nugaal oo walaac ka muujiyay gaadiid ay ku qoran yihiin taarkada GD.
Febraayo 9, 2013 6:29 b 0
Garoowe, Feb 09- Taliska wadooyinka gobolka Nugaal ayaa walaac xoogan ka? muujiyay gaadiid ay ku qoranyihiin? taarkada gaadiidka dowladda ee loo yaqaano GD? kuwaasi oo ay qaarkiis wataan dad rayid ah.
Taliyaha amniga wadooyinka gobolka Nugaal Ismaaciil Xirsi Qabaal oo lahadlay Radio Daljir ayaa? tilmaamay in waayadaan ay soo shaac baxeen soona badanayaan gaadiid lagu qoranayo magaca dowladda oo looga gaashaamanayo?? canshuuraha iyo arimo kale oo xaga nabad galyada.
Taliyaha wuxuu warkaan ku sheegay maxkamada gobolka Nugaal halkaasi oo aya socotay dacwada kiis la xiriira shil gaari oo ay ciidankiisu gacanta ku hayeen.
Magaalooyinka waaweyn ee Puntland waxaa ku badan gawaarida gaar ahaan kuwa yaryar ee raaxada ee ay ku dhagan yihiin taarkooyinka gaadiidka dawladda ee loo yaqaan GD.
Gaadiidleyda goboladda Puntland ka shaqeeya oo cabasho ka muujiyay Go’aan lagu joojiyay shidaalka Yemen
Maamulka kumeel gaarkaa ee Kismaayo oo sheegay inay meel wanaagsan marayaan qorshihii maamul goboleedka Jubba-land.